Maui, HI • Body Mass sy NuRu Massage
Maui County, amin'ny fomba ofisialy dia County of Maui, dia faritany iray ao amin'ny fanjakan'ny Etazonia any Hawaii. Izy io dia misy ny nosy Maui, Lānaʻi, Molokaʻi (afa-tsy ny ampahany amin'ny Molokaʻi izay misy ny Kalawao County), Kahoʻolawe, ary Molokini. Ireto farany dia tsy misy mponina. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, 154,834 ny isam-ponina. Karazana fanorana rehetra: Nuru fanorana , Voninkazo, Fanorana vatana manontolo.